"Anyị gosipụtara afọ ojuju anyị" Gọọmentị nke Canada, European Union, Ireland, United Kingdom, na United States niile katọrọ mmachi Twitter nke Naịjirịa na nkwupụta ha jikọrọ aka.
Gọọmentị Canada, European Union, Ireland, United Kingdom na United States niile katọrọ mmachi Twitter nke Naịjirịa na nkwupụta ha jikọrọ aka.
Canada, European Union, Ireland, United Kingdom, na United States of America ewepụtala nkwuputa ọnụ na-ekwu maka mmachi mmachi gọọmentị Naịjirịa machiri.
Na Fraịde, abalị anọ nke ọnwa Juun, abalị abụọ ka Twitter gbachara tweet nke onyeisiala Naịjirịa maka imebi usoro ọrụ ya, Mịnịstrị nke Ozi na Ọdịbendị nke Naịjirịa kwuputara na gọọmentị Naịjirịa "kwụsịtụrụ" Twitter.
Na mgbakwunye, gọọmentị Naịjirịa chọrọ ka e debanye aha maka ihe ntanetị ndị ọzọ.
Canada, United Kingdom, United States of America, Ireland, na European Union gosipụtara ndakpọ olileanya na nkwupụta ọnụ na-agụ, sị: “Ndị nnọchi anya mba Canada, European Union (Delegation to Nigeria), Republic of Ireland, United Kingdom, na United States of America na-ekwupụta mmechuihu ha na ọkwa ọkwa Naịjirịa kwụsịtụrụ # Twitter na ịtụ aro ndebanye aha maka nyiwe mgbasa ozi ndị ọzọ. "
“Anyị kwenyesiri ike na ikike mmadụ nweere onwe ya ikwu okwu yana ịnweta ozi bụ ogidi nke ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa na ụwa niile, ma na ikike ndị a na-emetụta ma n'ịntanetị ma n'ịntanetị. Machibido usoro ngosipụta abụghị azịza ya.
“Ihe ndị a na-egbochi ohere inweta ozi na azụmahịa n’oge Nigeria chọrọ ịkwalite mkparịta ụka yana echiche uche, yana ịkekọrịta ozi dị oke mkpa n’etiti mgbasa ọrịa COVID-19.
“Tozọ a ga-esi nwetakwuo nchekwa na Naịjirịa chọrọ ịrị elu, anaghị agbadata, nkwukọrịta iji soro mbọ ụmụ amaala Naịjirịa tinyere n’ịdị n’otu, udo na ọganihu. Dị ka ndị mmekọ Naịjirịa, anyị dị njikere inye aka n'imezu ebumnuche ndị a.
Edebela gọvanọ Osun ka ọ rụọ ọrụ nkwupụta nke ọha na eze banyere gọọmentị mpaghara Nwere ike 29, 2021
Obodo United Kingdom chọrọ ka ewepụta iwu ntuli aka na Naijirịa ngwa ngwa o kwere mee April 28, 2021
Otu onye ntaakụkọ kpughere ebubo "bribe video" Gọvanọ Ganduje gbagara na United Kingdom Nwere ike 3, 2021
N'ihe gbasara egwu, onye nta akụkọ nke kpughere vidiyo ego nke Gọvanọ Ganduje kwagara United Kingdom Nwere ike 3, 2021
Mgbe ha lụrụla afọ 27, Melinda na Bill Gates kwupụtara ebumnuche ha ịkwụsị alụm di na nwunye ha Nwere ike 3, 2021
Naịjirịa ga-enweta enyemaka site na mba Amerịkà ịlụ ọgụ maka enweghị nchekwa Nwere ike 20, 2021
Buhari na-arịọ Amerịka ka ha ziga ndị agha Amerịkà ka ha nyere aka gbochie nsogbu nchekwa Naịjirịa. April 27, 2021
Tags:ochichi onye kwuo uche ya na Naijiria, ministri nke ozi na omenaala